Geylang666 | Time Sharing, Paid Dating, Escort, Massage
အရေးကြီးအချက်အလက်： geylang666သည်အာရှရှိအရွယ်ရောက်သူများအတွက်အချိန်မျှဝေးခြင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်သည် 。သင်အရွယ်ရောက်သူဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါ ,သို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းမှထွက်ခွာပါ 。
REMINDER: As contents are all user-generated, and the platform is for free, we remind users to adopt our "Photo Verification" and "Review" mechanism to jointly keep an honest platform! Please also be reminded NEVER to involve in ANY remote financial transaction!
【ရွေးချယ်ပါ】ဘယ်မြို့မှာမိတ်ဖက်ရှာဖွေမှာလည်း ?အာရှပစိဖိတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ကြီးများ :- မဲလ်ဘုန်းမြို့- စင်ကာပူ- ဂျိုဟိုး-ဘဟူး- ကွာလာလမ်ပူ- ဟောင်ကောင်- Coming Soon...Mainland China Suspended
ငြင်းဆိုမှု : geylang666အသုံးပြုသူများကိုအခမဲ့အကြောင်းအရာထုတ်ဝေပေရေးပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ 。ကျန်ုပ်တို့ post မတင်ပါ သို့မဟုတ် ဝါဒဖြန့်ဖြူးခြင်းမလုပ်ပါ , မည့်သည့်အသုံးပြုသူမှ တင်သောအကြောင်းအရာအတွက်လည်းတာဝန်မယူပါ 。သုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဥ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရန်သတိပေးအပ်ပါသည် .